Afaka Miara-mipetraka ve ny Voaroaka sy ny Havany Rehefa Mivory? | Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luo Malagasy Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ouzbek Pangasinan Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mety ve raha miara-mipetraka amin’ny zanany voaroaka ny ray aman-dreny kristianina, any am-pivoriana?
Tsy tokony hampanahy be antsika ny toerana ipetrahan’ny voaroaka any amin’ny Efitrano Fanjakana. Nampirisika ny ray aman-dreny kristianina foana ity gazety ity mba hanome fanampiana ara-panahy ho an’ny zanany voaroaka mbola mipetraka ao an-tranony, raha hitan’izy ireo hoe mety izany. Milaza Ny Tilikambo Fiambenana 1 Oktobra 2001, pejy 16-18, fa azon’izy ireo ampianarina Baiboly ilay zanany voaroaka mbola tsy ampy taona, raha mipetraka ao amin’izy ireo. Mety hampahery an’ilay ankizy izany ka hiova izy.
Afaka mipetraka mangina eo akaikin’ny ray aman-dreniny ny ankizy tsy ampy taona voaroaka, rehefa any amin’ny Efitrano Fanjakana. Tsy misy fitsipika hoe tsy maintsy mipetraka any amin’ny farany aoriana ny voaroaka. Azon’ilay ankizy atao àry ny mipetraka eo akaikin’ny ray aman-dreniny, na aiza na aiza ipetrahan’izy ireo. Mikarakara ny zanany eo amin’ny lafiny ara-panahy koa ny ray aman-dreny, ka tokony hanampy azy handray soa faran’izay betsaka amin’ny fivoriana. Mety ho tsara àry raha mipetraka eo akaikin’izy ireo ilay zanany voaroaka, fa tsy mipetraka any an-toeran-kafa ka tsy ho voarany maso.
Ahoana anefa raha tsy miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreniny intsony ilay voaroaka? Dia tsy mahazo mipetraka eo akaikin’izy ireo ve izy any am-pivoriana? Efa nohazavaina tsara tato amin’ity gazety ity ny toro lalana tokony harahin’ny Kristianina, momba ny fifaneraserana amin’ny havana voaroaka tsy mipetraka ao an-trano. * Tsy mitovy mihitsy anefa ny hoe manao izay hifaneraserana tsy amin’ny antony amin’ny havana voaroaka, sy ny hoe misy olona voaroaka mipetraka mangina eo akaikin’ny havany mandritra ny fivoriana. Tsy misy tokony hampanahy raha manana toe-tsaina tsara ireo mpianakavy tsy mivadika, ka miezaka mankatò ny torohevitry ny Soratra Masina momba ny fifaneraserana amin’ilay havany voaroaka.—1 Kor. 5:11, 13; 2 Jaona 11.
Tsy mampaninona izay ipetrahan’ilay voaroaka, na eny akaikin’ny havany na eny akaikin’ny olon-kafa, raha mbola tsy manelingelina ny hafa izy. Tsy tokony hihevitra àry ny fiangonana hoe tsy mahazo mipetraka eo akaikin’ny havany mihitsy ny olona voaroaka, rehefa ao amin’ny Efitrano Fanjakana. Raha ferantsika ny toerana azon’ny olona tsirairay ipetrahana any am-pivoriana, dia mety hisy olana samihafa, arakaraka ny toe-javatra. Raha miezaka mankatò ny toro lalan’ny Baiboly momba ny voaroaka ny rehetra, anisan’izany ireo manana havana voaroaka, ary raha tsy manafintohina an’ireo rahalahy sy anabavy ny toerana ipetrahan’ilay voaroaka, dia tsy tokony hampanahy be antsika ny toerana ipetrahan’ny olona ao amin’ny Efitrano Fanjakana.
^ feh. 5 Jereo ny boky “Fitiavan’Andriamanitra”, pejy 207-209.